ပင်မစာမျက်နှာ / induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို / လူမီနီယမ်အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို ရောင်းရန် / Aluminum Smelter
Categories: လူမီနီယမ်အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို, induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို, သတ္တုအရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို Tags: အလူမီနီ smelter, အလူမီနီ smelter တရုတ်, လူမီနီယမ် smelter သော induction, အလူမီနီ smelter စျေးနှုန်း, အလူမီနီ smelter ဖြစ်စဉ်ကို, အလူမီနီ smelter ရောင်းချ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူမီနီယံ smelters, အလူမီနီရောစပ်, အလူမီနီ smelter Buy, IGBT လူမီနီယံ smelter, သော induction လူမီနီယံ smelter, MF လူမီနီယံ smelter
အဆိုပါရောစပ်မှုအတွက်သော induction နှင့်အတူထိပ်တန်းတရုတ်လူမီနီယံ smelter နှင့်လူမီနီယံ ချ. , လူမီနီယမ်မီးဖို, လူမီနီယံသော induction smelter, etc လူမီနီယမ်အရည်ပျော်သော induction မီးဖို, 1000kg အရည်ပျော်လူမီနီယံမီးဖို, အရည်ပျော်သော induction ။
Aသော induction နှင့်အတူလျှပ်စစ်သံလိုက်အယ်လ်အရည်ပျော်မီးဖို၏ dvantages:
electromagnetic induction အပူနည်းလမ်းသံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အပူလျင်မြန်စွာအပူ, လျင်မြန်စွာအရည်ပျော်လူမီနီယမ်အလွိုင်းပါစေ။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သော Real-time နဲ့တိကျမှန်ကန်ပါ!
အစဉ်အလာလျှပ်စစ်မီးဖိုအပူနည်းလမ်းခုခံဝါယာကြိုးအပူသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဓာတ်တိုး၏အသုံးပြုမှုအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခုခံဝါယာကြိုး၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝလျှော့ချမြင့်မားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။ အဆိုပါလျှပ်စစ်သံလိုက်အပူကွိုင်ပစ္စည်းနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ဝါယာကြိုးကာကှယျ၏လုပ်, ဒါကြောင့် service ကိုဘဝရှည်လျားမည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။
SMJD စီးရီးသော induction လူမီနီယံ smelter ၏စွမ်းရည်အရည်ပျော်:
SMJD-463 ၆၀ ကီလိုဝပ် 200 KG 500 KG 200 KG
SMJD-480 ၆၀ ကီလိုဝပ် 150 KG 500 KG 150 KG
SMJD-580 ၆၀ ကီလိုဝပ် 200 KG 600 KG 200 KG
SMJD-600 ၆၀ ကီလိုဝပ် 230 KG 560 KG 230 KG
SMJD-900 ၆၀ ကီလိုဝပ် 300 KG 900 KG 300 KG
SMJD-905 ၆၀ ကီလိုဝပ် 300 KG 900 KG 300 KG
SMJD-1250 ၆၀ ကီလိုဝပ် 400 KG 1200 KG 400 KG
SMJD-1250 ၆၀ ကီလိုဝပ် 450 KG 1350 KG 450 KG
SMJD-1500 ၆၀ ကီလိုဝပ် 500 KG 1500 KG 500 KG
SMJD-1550 ၆၀ ကီလိုဝပ် 520 KG 1560 KG 520 KG
အရည်ကျိုမီးဖို, 300kg, 500kg အရည်ပျော်သံလိုက် induction လူမီနီယမ်
သော induction နှင့်အတူအရည်ပျော်ရွှေကိုမီးဖိုထဲစောင်း
Induction Wire အပူလုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးချခြင်း